RAVALOMANANA MARC : Nandatsaka an-kady ny Firenena !!!
Ao anatin’ny ady hamoahana ny Firenena ao anatin’ny lavaky ny fahantrana tanteraka ny Fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina, ankehitriny. 21 septembre 2021
Tao anatin’izay 60 taona nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena izay dia mbola voasokajy ho Firenena mahantra isika ary mbola saika ahitana an’ireo valanaretina tsy fahita raha tsy amin’ny tany mahantra intsony mihitsy aza. Anisany antony fototra mahatonga izany, hoy ireo mpamakafaka ara-politika, ny fomba fitantanana tsy mahomby nifanesy teto amin’ny Firenena. Nibahan-toerana ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tseza, tsy nijery afa-tsy ny tombontsoany manokana fa tsy mba tombontsoam-bahoaka. Misy amin’ireo Mpitondra teo aloha anefa no sahy manala ny tenany fa tsy tompon’antoka tamin’ny fampahantrana ny Firenena. Ho azy, dia ny Mpitondra ankehitriny no mahatonga izao fahasahiranana lalina mianjady amin’ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy izao. Tsy fantany anefa fa fomba fitantanana hatrany aloha no nisy lesoka, izay mbola namela tarazom-pahantrana mandraka ity ny androany.
Nogiazana ny tsena anatiny
“Tsy mahantra i Madagasikara fa nampahantraina”, araka ny nambaran’ireo mpanao politika. Nampahantraina tamin’ny fomba fitantanana izay tsy nihevitra afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany manokana. Raha tsiahivina manokana ny taona niasan’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia tsy nisy afa-tsy ny fitadiavana izay tombontsoa ho an’ny fianakaviany sy ny orinasany manokana. Niroborobo fatratra manerana an’i Madagasikara iray manontolo ny orinasany tamin’ny fotoan’andro, azo lazaina ho azy irery mihitsy ny famatsiana tato anatin’ny tsena anatiny, ka raha vao nisy orinasa hafa nitady hifaninana taminy, avy hatrany dia niharan’ny tsindry hazo lena.
Tahaka izany ny fomba fitantanana teo amin’ny lafiny ara-ekônômika tamin’izany fotoana, tsy mba namokatra ara-dalàna ny olona. Tsy maintsy amatsiana ny orinasa Tiko ny vokatra rehetra raha tsy izany dia tsy avelan’ny Fanjakana tamin’izany fotoana amidy eny an-tsena. Ireo mpamokatra ronono tao Antsirabe dia nilaza fa raha vao tsy omena ho an’ny orinasa Tiko ny vokatr’izy ireo dia tsy mahazo amidy amin’ny toeran-kafa intsony ary sakanan’ny mpitandro filaminana teo Andranomanelatra raha mba nikasa hampiakatra izany hitady mpanjifa taty Antananarivo. Rariny raha tsy nandroso ny seha-pamokarana maro eto amintsika ankehitriny satria efa hatramin’izay no nezahina nopotehina mba ho tombontsoan’olom-bitsy.
Tsy nandoa hetra amina miliara maro
Iaraha-mahalala fa miantoka betsaka ny fampandrosoana ny Firenena ny hetra. Ny hetra no afaka mampihodina ny raharaham-panjakana, ananganana fotodrafitrasa ho an’ny vahoaka ary miantoka ny fampandrosoana ny Firenena iray manontolo mihitsy. Nandritra ny fotoana nahateo amin’ny Fitondrana ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc anefa dia tsy nampandoaviny hetra ireo orinasany. Izany no atao hoe, fanararaotam-pahefana miharo didy jadona satria tsy nisy na dia iray tamin’ireo tompon’andraikitra nisahana ny hetra tamin’izany fotoana aza no sahy nitaky ireo hetra tsy voaloany.
Taty amin’ny taona 2020 vao nivoaka ny marina rehetra fa mitontaly amina miliara maro ny fitambaran’ny hetra tsy voaloan-dRavalomanana. Ankehitriny anefa dia sahy miala tsy ho tompon’andraikitra amin’ny zava-misy ny tenany. Mihevi-tena ho madio tsy misy pentina satria Mpitondra tena nanao marina tamin’ny fitantanana. Io tsy fandoavan-ketra nataony io dia famarinana an-kady ny Firenena satria hetra tokony hanasoavana ny Firenena, hananganana fotodrafitrasa sy hanaovana tetikasa ho an’ny taranaka fara aman-dimby no nogiazany. Isan’ireo tompon’antoka voalohany tamin’ny fampahantrana ny Firenena sy ny vahoaka malagasy Ravalomanana Marc.
Mpanitsakitsaka ny fahafaha-miteny
Am-bentin-tenin’ireo mpanohitra amin’izao fa tsy misy ny fahafahana miteny sy maneho hevitra eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana izao. Izay tokoa ilay manao, “ririnin-dasa tsy tsaroana”. Raha nisy ny Mpitondra tena tsy namela malalaka ny fahafaha-maneho hevitra teto amin’ny Firenena dia izany Ravalomanana Marc izany. Nakatona ny haino aman-jery tsy miankina iray tamin’izany fotoana izany satria tsy nitovy fomba fijery taminy. Fandaharana antso an-tariby entin’ny olom-pirenena maneho hevitra tamina onjam-peo tsy miankina iray ihany koa no natsahatra satria manohintohina ny endriky ny Fitondrana tamin’izany. Ankehitriny anefa sahy milaza Ravalomanana sy ny ekipany fa manitsakitsaka ny fahafahana maneho hevitra ny Fitondrana ankehitriny.
Ambarany ho manitsakitsaka ny Lalàmpanorenana ihany koa kanefa raha nisy ireo tena nanao tsinontsinona ny lalàna dia ny tenany tamin’izany fotoana izany. Mikiry mafy ny mbola hiverina eo amin’ny Fitondrana ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Manao ezaka ho amin’izany ihany koa ireo ekipany ao anatin’ny RMDM. Ny zava-misy anefa efa liam-pandrosoana ny vahoaka ary tsy te hiverina ao anatin’ny Fitondrana miharo fitiavan-tena sy fitiavan-tseza intsony. Porofon’izany, zara raha mahasarika olona ny hetsika ataon’ireo mpanohitra. Vao haingana ilay hetsika tao Antsirabe izay tsy nisy afa-tsy olom-bitsy no tonga nihaino ny kabary nataon’ny sekretera jeneralin’ny antoko sy ireo mpiara-miasa taminy.